Baker-Olimpico silikoon Macaroon Mat - Shiinaha Baker-Olimpico silikoon Macaroon Mat qeybiye,-SHQD Factory
Baker-Olimpico silikoon Macaroon Mat
size: 16 1/2″x 11 5/8″ (420 x 295mm)
dhumucdiisuna: 0.75mm (+/-0.05mm)
miisaanka: 4.1 oz / 116g (+/- 5g)
Waa maxay sababta Dooro The Baker Olimpico silikoon Macaroon Mat
Baker-Olimpico waxaa ka go'an inuu siiyo xirfadlayaasha tayo leh qaabab cusub iyo qaab qalabka dubista u ogolaanaya dadka Sagna ay ku fikirayaan iyo hal-abuurka. Oo Baker-Olimpico had iyo innovating fikradaha cusub hal abuur leh oo kor u horumarinta warshadaha dubista iyo bixiyaan xal waayo caqabado farsamo.
Baker-Olimpico ayaa muhiim u ah wax xumu of derin ah, waxaan dooran heerka ugu sareeya ee Maro adag iyo Besian silicone dareere ah sida wax cayriin. Ka sokow, Baker-Olimpico qabsadey muhiimadda badan inay gacanta ku tayada, sidaas our derin waa 100% BPA free, iyo gudubtay imtixaankii ee FDA, LFGB iyo DGCCRF.
Intaa waxaa dheer, Baker-Olimpico leeyahay xirfadaha daabacaadda ka xoogbadan, iyo qabsadey muhiimadda badan macaamiisha’ waayo-aragnimo. printings waa heer sare ah oo cad oo aan marnaba dhaco isticmaalka ka dib soo noqnoqda, oo dadka ka caawiya in loo fududeeyo habka dubista. Iyo khad daabacaadda waxaa sidoo kale laga sameeyey oo silicone ansixiyey FDA iyo LFGB, taas oo ah in la caddeeyo in ay tahay ammaanka fasalka ahayn sun ah iyo cunto.
Baker-Olimpico isku daro faa'iido ah ee Besian wax silicone dareere ah iyo processing gaar ah, oo abuuraa sifooyinka fiican AAN ul. Iyada oo si fudud uga soo derin saari macaron, this dermaha dubista macaron silicone ahaayeen BY FAR dusha ugu fudud si ay ula shaqeeyaan.
Si fudud Macaron Making
Our design goobo indent si gaar ah waxaa loogu talagalay dubista macaron. Waxay ka caawiyaan wax dubi jiray baytari macaron tuubooyin in wareeg yar oo kaamil ah. goobada kasta waa in size Heerka caadiga ah ee macaron ganacsi. Si aad baytari goobada kasta, derin waa kaamil for samaynta macaron in xajmiga saxda ah ee ugu fiican uguna hufan oo aan warqad hannaankii dheeraad ah cabbirka.
Baker-Olimpico derin macaroon dhumucdiisuna(0.75mm) waa badan sii dhumuc weyn oo ka badan dabacsan badan dermaha suuqa, taas oo amaan u jaraya cookie oo u dhow 3000 jeer soo noqnoqda isticmaalka sabab u ah oo dhumucdiisuna waxay ka xoogbadan, iyo alaabta ceeriin oo tayo sare leh, iyo meel macaroon go'an caawisaa bilowga ah in ay si fudud u bartaan. Waa maxay more, Baker-Olimpico derin macaroon leh iska caabin heerkulka aad u fiican(-40℉ in 480℉), dabacsanaan ku qumman.
Baker-Olimpico Ubax Induction makiinada dalaka
Baker-Olimpico isticmaali karo PTFE rootiga Bag